Sachet Tomato Namatira Vatengesi uye fekitori - China Sachet Tomato Nyatso vagadziri
"Zvakanakisa mbishi kugadzira kunaka kuravira!" Isu tine yepamusoro mhando yekutonga pane iyo yekugadzira yekufambisa uye tinopa yekutanga-kirasi sevhisi kune vatengi vane yakasimba technical technical rubatsiro. Tinoshuvira kuwedzera misika yakawanda pamwe neshamwari dziri pasi rese kuti tigadzire ramangwana rakajeka pahwaro hwekubatsirana. Pamusoro pekakaniki yemadomasi, tinogonawo kukupa sachet nyanya nyanya, nyanya yemadomasi ine Flat Sachet uye Standup Sachet. Kune akasiyana masize, tinogona kuita 50g 56g 70g 100g nezvimwewo ...
70g Sachet Tomato Namatidza (Flat Bhegi)